“၅၀၅ (က) ကိုရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပေမယ့်လည်း အာဏာရှင်ကို ဆက်လက်ပြီး တော်လှန်နေမှာ ဖြစ်ကြောင်း”ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး – Cele Snap
“၅၀၅ (က) ကိုရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပေမယ့်လည်း အာဏာရှင်ကို ဆက်လက်ပြီး တော်လှန်နေမှာ ဖြစ်ကြောင်း”ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး
မကွာ.သေးခငျ ရကျပိုငျးလောကျက ပုဒျမ ၅၀၅ (က) ဖွငျ့ တရားစှဲဆိုအရေးယူခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျမြားထဲမှ(၂၄)ဦးကို အမှုမှကငျးလှတျခှငျ့ပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ထို (၂၄) ဦးထဲတှငျ သရုပျဆောငျ သီဟထှနျးလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ အခုလို အမှုရုတျသိမျးပေးခံခဲ့ရပမေ.ယျ့လညျး သှေးအေးမသှားဘဲ တျောလှနျရေးနဲ့ တဈသားတ..ညျး ရှိနေ.မယျ့သူ ဖွဈကွောငျးကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျတှငျ ရေးသားဝမြှေထားတာ ဖွဈပါ တယျ။
သူ့ကို အမှုပိတျတဲ့အကွောငျး ထုတျတဲ့စာထဲတှငျ ပရောဂကွောငျ့ နှဦေးတျောလှနျရေးတှငျ ပါ.ဝငျခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပရောဂဝငျနတေဲ့ အာဏာရှငျလူတဈစုကို မောငျးထုတျဖို့အတှကျ ဒီတျောလှနျရေးမှာ ပွညျသူတှနေဲ့.အတူ ပေါငျးစညျးခဲ့တာဖွဈကွောငျး သခြောရှငျးပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အမှုပိတျတဲ့စာ မထုတျသေးတဲ့ ကာလတှမှောလညျး ခံဝနျကတိထိုးပွီး အိမျမှာ အေးအေးဆေးဆေး ပွနျနလေို့ရတဲ့အကွောငျး နီးစပျရာအနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးမှ တဈဆငျ့ အကွိမျကွိမျကမျးလှမျ.းခွငျးကို ခံခဲ့ရပမေယျ့လညျး ပွတျသားစှာ ငွငျးဆနျခဲ့သူ ဖွဈပါ တယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ အမှုကငျး လှတျကွောငျး ထုတျပွနျတဲ့ ကွငွောစာထဲမှာ သရုပျဆောငျ သီဟထှနျးအား ပရောဂကွောငျ့တျောလှနျရေးမှာ ပါဝငျခဲ့ရတယျလို့ ပရိသ.တျတှနေဲ့ သှေးကှဲအောငျ ရေးသားသုံးနှုနျးထ.ားတ.ာ ဖွဈပါတယျ။ နှဦေးမှာကဆြုံးခဲ့ရသူတှေ ၊ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရသူတှေ၊ ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှေ.ကို မကျြကှယျပွုပွီး .အေးဆေးနသှေားရမှာကိုလိပျပွာမလုံတဲ့အတှကျ. အမှုပိတျ သိမျးသှားလညျး နှဦေးတျောလှနျရေးနဲ့အတူ တဈသားတညျးရှိနမေညျဖွဈကွောငျ.း သရုပျဆောငျ သီဟထှနျးမှ ရေးသားထားပါ တယျ။
မကြာ.သေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်က ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုအရေးယူခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များထဲမှ(၂၄)ဦးကို အမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို (၂၄) ဦးထဲတွင် သရုပ်ဆောင် သီဟထွန်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို အမှုရုတ်သိမ်းပေးခံခဲ့ရပေမ.ယ့်လည်း သွေးအေးမသွားဘဲ တော်လှန်ရေးနဲ့ တစ်သားတ..ည်း ရှိနေ.မယ့်သူ ဖြစ်ကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်တွင် ရေးသားဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
သူ့ကို အမှုပိတ်တဲ့အကြောင်း ထုတ်တဲ့စာထဲတွင် ပရောဂကြောင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါ.ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရောဂဝင်နေတဲ့ အာဏာရှင်လူတစ်စုကို မောင်းထုတ်ဖို့အတွက် ဒီတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့.အတူ ပေါင်းစည်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သေချာရှင်းပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုပိတ်တဲ့စာ မထုတ်သေးတဲ့ ကာလတွေမှာလည်း ခံဝန်ကတိထိုးပြီး အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်နေလို့ရတဲ့အကြောင်း နီးစပ်ရာအနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှ တစ်ဆင့် အကြိမ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်.းခြင်းကို ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း ပြတ်သားစွာ ငြင်းဆန်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါ့ကြောင့် အမှုကင်း လွတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေငြာစာထဲမှာ သရုပ်ဆောင် သီဟထွန်းအား ပရောဂကြောင့်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတယ်လို့ ပရိသ.တ်တွေနဲ့ သွေးကွဲအောင် ရေးသားသုံးနှုန်းထ.ားတ.ာ ဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦးမှာကျဆုံးခဲ့ရသူတွေ ၊ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေ၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ.ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး .အေးဆေးနေသွားရမှာကိုလိပ်ပြာမလုံတဲ့အတွက်. အမှုပိတ် သိမ်းသွားလည်း နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်.း သရုပ်ဆောင် သီဟထွန်းမှ ရေးသားထားပါ တယ်။
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ သူ့ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် စိန်ဖြိုးလှိုင်(မောင်)